ကျော်ထက်ဝင်း နည်းပညာ တက္ကသိုလ် ဘားအံ နှင့် ဇွဲကပင်မြေ Technological University Hpa-an: High Rise Building Design အကြောင်း ( M&E ပညာ )
High Rise Building Design အကြောင်း ( M&E ပညာ )
High-rise building တစ်ခုအတွက် ဒီဇိုင်း လုပ်တဲ့ အခါ ပြဿနာ တစ်ခု အတွက် အဖြေက တစ်ခုထဲ မဟုတ် နိုင်တော့ပါဘူး။ အရွယ်အစား နဲ့ Configuration တူနေရင် တောင် မှ Site Location မတူတာ နဲ့ပဲ သုံးသင့်တဲ့ M&E Systems နဲ့၊ Central Plant ထားသင့်တဲ့ နေရာ တူချင်မှ တူပါမယ်။ ရာသီဥတု အခြေအနေ နဲ့ ဒေသ ရဲ့ စီးပွားရေး အခြေအနေ နဲ့ ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံးစံ စတဲ့ အချက်တွေကလည်း M&E Systems တွေ ရွေးချယ်ရာ အကြောင်းရင်း တစ်ချို့ဖြစ်ပါတယ်။
ထူးခြားတဲ့ အခက်အခဲ နဲ့ ထည့်သွင်းစဉ်းစား ရမဲ့ အချက် တွေကတော့
Life Safety (အရေးပေါ် အခြေအနေ မှာ လူတွေ ဘေးမသီ ရန်မခ လွတ်မြောက် အောင် ဘယ်လိုလုပ်ထား ရမှာလဲ။ မီးသတ်စနစ် တွေ၊ မီးဘေး ကာကွယ်ရေး စနစ်တွေ က ရော ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲ။)
Space Requirements (နေရာ လိုအပ် ချက်)
Water / Hydronic Systems Pressure(ရေဖိအား ကို ဘယ်လို ထိန်းမှာ လဲ။ ဒါက ရေသုံးတဲ့ စနစ် တိုင်း အတွက် စဉ်းစားရမှာပါ။)
Electrical Distribution, Wiring & Voltage Drops
MEP Systems တွေကို ဒီဇိုင်းလုပ် သူတွေ အတွက် Architectural & Structural Design တွေကို ဒီဇိုင်းလုပ်ပေး စရာမလို ပေမဲ့ ကောင်းကောင်း ကြည့်တတ် ပြီး နားလည်နိုင်ဘို့ လိုအပ်ပါတယ်။
အပေါ်ဆုံး အမိုးပေါ် မှာ Elevator Equipments, နဲ့ Elevator overtravel, Cooling Towers, Exhaust Fans နဲ့ အခြား Equipment ကို ငုံပြီး ကာထား တဲ့ အထပ် တစ်ထပ် ထည့်ဆောက် တာပါ။ Elevator Overtravel ဆိုတာ ကတော့ ဓာတ်လှေကား လိုအပ်တဲ့ အတိုင်း အချိန်မီ မရပ်နိုင်ခဲ့ရင် အရှိန်လျော့ ဘို့ အတွက် ချန်ထားတဲ့ နေရာ (အမြင့်) ကိုခေါ်တာပါ။ ဒါက အခြေခံကျ တဲ့ ပုံစံ ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံ အတော် များများ နဲ့ မြို့ အတော်များများ မှာ အာဏာပိုင် အဖွဲ့ အစည်းတွေ ရဲ့ လိုအပ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။
အပေါ်ဆုံး တစ်ထပ်၊ နှစ်ထပ် ကို Cooling Towers, Air Handling Units တွေနဲ့ Elevator Equipments စတဲ့ Upper-Level M&E equipments တွေ ထားဘို့ အတွက် ဒီဇိုင်းလုပ် ထားတာပါ။ ထင်ရှားတဲ့ အဆောက်အအုံ ကတော့ 9/11 တုန်းက ဖျက်ဆီး ခံခဲ့ရ တဲ့ New York -World Trade Center ဖြစ်ပါတယ်။
Intermediate Floor Bands Design
အထပ် ၃၀ ထက်မြင့်တဲ့ အဆောက်အအုံ တွေမှာ Central M&E Equipments တွေ ကိုထား ဘို့ အတွက် ကြားမှာ Intermediate Floor ထားရှိ ရပါတယ်။ M&E Systems တွေအတွက် အထပ်အမြင့် ပိုလိုတာမို့ ဒီ Intermediate Floors တွေ ရဲ့ Façade ကို အခြား အထပ်တွေ နဲ့ မတူခြားနား တာကို မြင်တွေ့ နိုင်ပါတယ်။
၁၉၉၀ နောက်ပိုင်းမှာ အထိန်းအမှတ် ပုံစံ အနုပညာ အဆောင်အယောင် တွေနဲ့ သီးသန့် အလှဆင် ထားတဲ့ Sculpture-Type rooftops တွေ ခေတ်စား လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီပုံစံ တွေမှာ Cooling Tower တွေကို မြေညီထပ် နဲ့ နီးတဲ့ နေရာ ပို့ချင်ပို့ ဒါမှမဟုတ် အဆောက်အအုံ ထဲမှာ ထည့်ထားချင် ထည့်ထား ရပါလိမ့်မယ်။
အရေးပေါ် အခြေအနေ၊ လိုအပ်ချက် တွေပါဝင်ဘို့ လိုပါတယ်။ အဓိက ကတော့ မီးဘေးအန္တရာယ် ပါ။ မီးအန္တရာယ် ဆိုတာမှာ မီးသာ မက ဆက်နွယ် နေတဲ့ မီးခိုး၊ အဆိပ် အတောက် တွေ နဲ့၊ မီးကြောင့် ပြိုကျ ပျက်စီး မဲ့ အဆောက်အအုံ ရဲ့ အစိတ်အပိုင်း တွေ ကိုပါထည့်သွင်း စဉ်းစား ရပါမယ်။
အများအားဖြင့် mixed occupancies ရုံးခန်းတွေ၊ ဆိုင်ခန်း၊ ဈေး (Office Premises, Shopping Malls, Retail Outlets, Amusement Arcade, Residents, Mass Transport Terminals) တွေ ပါရှိ နိုင်ပါတယ်။ အရွယ်အစား အလယ်အလတ် လောက် ရှိတဲ့ High-Rise Building တစ်ခုမှာ ရှိနေနိုင် တဲ့ Occupants (လူတွေ) ၅၀၀ ကနေ ၁၀၀၀ လောက်ရှိ နိုင်ပြီး အရွယ်အစား ကြီးမားတဲ့ City နာမည် တတ်ထားနိုင်တဲ့ အဆောက်အအုံ တွေမှာ ဆို လူထောင်ပေါင်း များစွာ ရှိနေနိုင် ပါတယ်။ ဒီအထဲ မှာ ပတ်ဝန်းကျင် နဲ့ စိမ်းနေသေးတဲ့ ဧည့်သည် တွေ၊ ကလေးတွေ၊ မစွမ်းမသန် တွေ၊ သက်ကြီးရွယ်အို တွေ ပါ ရှိနိုင်တာမို့ အားလုံးကို အန္တရာယ် ကင်းကင်း ထွက်ခွာ စေနိုင်ဘို့ နဲ့ ရွှေ့ပြောင်း ပေးနိုင်ဘို့ အခက်အခဲ တွေ ရှိနေနိုင် ပါတယ်။
ဘယ်လို အခက်အခဲ ပဲရှိရှိ Occupants တွေရဲ့ Safety (အန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး) နဲ့ Well-Being (ကောင်းကျိုးချမ်းသာ ရရှိရေး) တွေ က မရှိမဖြစ် ပါဝင်ရမဲ့ အချက်တွေ ပါ။
ဒီလို အန္တရာယ် ကင်းကင်း လွတ်မြောက်နိုင်ဘို့ အချိန်ကို တွက်ချက် တဲ့ အခါ ASET > RSET ဖြစ်ရပါမယ်။
ASET (Available Safe Egress Time) ရရှိနိုင် တဲ့ အချိန်
RSET (Required Safe Egress Time) လိုအပ် တဲ့ အချိန်
Structural Safety (Passive Fire Protection)
လူတွေ အသုံးပြုတဲ့ အခြေအနေ ပေါ်မူတည် ပြီး Purpose Groups ခွဲပေးရပါတယ်။
Compartments လို့ခေါ်တဲ့ မီးဒါဏ်ခံ နိုင်တဲ့ အခန်းတွေ ဖွဲ့တာ တို့၊ စီစဉ်တာ တို့လုပ်ရ ပါမယ်။
မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ နဲ့ မီးသတ်ကားတွေ အချိန်မရွေး ဝင်လို့ရအောင်၊ မီးသတ်ကား ဝင်လို့ ရတဲ့ လမ်း နဲ့ ရပ်စရာ နေရာ တွေ၊
မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ အရံသင့် သုံးစရာ Fire Appliances တွေ ကို ထည့်သွင်း စဉ်းစားရ ပါမယ်။
အဆောက်အအုံ ရဲ့ အစိတ်အပိုင်း တွေ ကို လိုအပ်တဲ့ အချိန် အတိုင်းအတာ အထိ မီးဘေး၊ ဒါဏ်ခံ နိုင်ဘို့ FRR (Fire Resistance Rating, ) ကို သတ်မှတ် ပြီး ၊ သတ်မှတ်ချက် အတိုင်း ဆောက်လုပ် ရပါမယ်။
Purpose Group နဲ့ Dimension (အခန်း ရဲ့ အရွယ်အစား) ကို လိုက်ပြီး လိုအပ် တဲ့ minimum periods of fire resistance (hours) ကို သတ်မှတ် ရပါတယ်။
ရှိနေနိုင်တဲ့ လူအရေအတွက် နဲ့ နေရာ အကွာအဝေး ကို မူတည်ပြီး လိုအပ်တဲ့ အရေးပေါ် Emergency Exits (ထွက်ပေါက်) တွေ Staircases (လှေခါး) တွေ ကို ထည့်သွင်း ရမှာ ဖြစ်ပြီး၊ အထူးသဖြင့် အဲဒီနေရာ တွေကို မီးဒါဏ် ခံနိုင်ဘို့ နဲ့ မီးခိုး မရောက် လာစေဘို့ ဒီဇိုင်းလုပ်ရ ပါတယ်။
ရွေးစရာ Alternative Means of Escape ရှိထား ရပါမယ်။
Mean of Escape ဆိုတာက အန္တရာယ်ကင်း တဲ့ နေရာ (ဥပမာ၊ အဆောက်အအုံ ရဲ့ အပြင်ဘက်၊ (သို့) အဆောက်အအုံ အတွင်း အန္တရာယ်ကင်းကင်း ခိုနားစရာ နေရာ) တွေဆီ လမ်းညွှန်ပေးနိုင်မဲ့ အနီးစပ်ဆုံး လမ်းကြောင်း ကိုဆိုလိုတာ ပါ။ အထပ်မြင့် တော့ Ground Floor မရောက်ခင်ကြားမှာ ခိုနားစရာ နေရာ Refuge Floor လိုအပ်ကောင်း လိုအပ် ပါလ်ိမ့် မယ်။
အဆောက်အအုံ အတွင်းပိုင်း လူရှိ နေနိုင်တဲ့ နေရာ အားလုံး ကနေ လွယ်လွယ်ကူကူ ထွက်ခွာ နိုင်ဘို့ Exit Path တွေ လိုပါတယ်။
Unprotected Areas, leading direct to exit
Protected Areas, leading direct to exit
Protected Areas ဆိုတာကတော့ မီးအန္တရာယ် (အပူ၊ မီးခိုး) ကို အတိုင်းအတာ တစ်ခုထိ အကာအကွယ် ပေးနိုင်တဲ့ နေရာတွေ ကို ခေါ်တာပါ။
သွားရမဲ့ အကွာအဝေး ဖြစ်တဲ့ Travel Distance ကို စဉ်းစားရပါမယ်။
လှေကား ဆိုရင်လည်း ဘယ်လောက်ကျယ်ရမယ်။ လှေကား ဆိုတာ လူတွေ အရွယ်မရွေး တက်နိုင်ဆင်းနိုင် တဲ့ ခပ်ပြေပြေ Staircase ကိုဆိုလိုတာ ပါ။ မတ်စောက်လွန်း တဲ့ Ladder ကိုဆိုလိုတာ မဟုတ်ပါဘူး။ Staircase ကိုလည်း လှေကားထစ် တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု ညီညီညာညာ မျှမျှတတ ရှိရပါမယ်။ ခြေနင်း အကျယ် အမြင့် သင့်တော် အောင် ထားရပါတယ်။ မလေးရှား၊ စကာင်္ပူ မှာ ခြေနင်းပြား အရွယ် Thread Width အနည်းဆုံး ၁၀” (255mm Min) လှေကားထစ် တစ်ထစ် အမြင့် ၄ - ၇” (102mm - 180mm Max) ရှိရပါမယ်။ NFPA အရတော့ Thread Width အနည်းဆုံး ၁၁” (279mm Min) လှေကားထစ် တစ်ထစ် အမြင့် ၄ - ၇” (102 to 178mm) ရှိရ မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ကြောင်လိမ် လှေကား သုံးခွင့် ရရင်တော့ လိုအပ်ချက် ကို ထပ်မံစစ် ဆေး ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လှေကား မှာ ရွေးစရာ အရံ တစ်ခု အနည်းဆုံး ပါဝင်သင့်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဒီလှေကားတွေ အမိုးပေါ် အထိ ပေါက် ဘို့ လည်း လိုအပ် ပါတယ်။ ပြီးတော့ မြေပြင်ပေါ် အန္တရာယ် ကင်းကင်း ထွက်ခွာ နိုင်တဲ့ ထွက်ပေါက် လည်း ပါဝင်ရ ပါမယ်။ လူတွေ ယောင်ယောင်မှား မှာ မဖြစ် စေဘို့ မြေအောင် လှေကား နဲ့ မြေပေါ် လှေကား ကို သီးသန့် ခွဲ ထားပေးရပါမယ်။
ပြင်ပ လေထု နဲ့ တိုက်ရိုက် မထိနေတဲ့ အဆောက် အအုံ ရဲ့ အတွင်းပိုင်းဖြစ် နေရင် Pressurization (Inflation) System လို့ ခေါ်တဲ့ မီးခိုးမဝင် အောင် လေကို ဖိ မှုတ် ပေးနေနိုင် တဲ့ Blower (Fan) တွေ ကို တွက်ချက် တတ်ဆင် ပေးရပါမယ်။ အပြင်ဘက် မှာ ဆိုရင် တော့ လုံလောက်တဲ့ Natural Ventilation Louvers တွေပါဝင် ရပါမယ်။
Elevator use for Evacuation
နိုင်ငံ တော်တော် များများ မှာ Elevator နဲ့ Evacuate လုပ်တာကို တားမြစ်ထား ဆဲပါ။ US က NFPA Code မှာတော့ အတိုင်းအတာ တစ်ခု အထိခွင့်ပြု ထားပါတယ်။ အမေရိကန် Architects တွေကတော့ Elevator သုံးနိုင်ဘို့ ကို အားသန် ကြပါတယ်။
NFPA Code : An elevator complying with the requirements of Section (x.x) and (x.x.x) shall be permitted to be used asasecond means of egress from towers, as defined in (x.x.xxx), provided that the following criteria are met:
The tower and any attached structure shall be protected throughout by an approved, supervised automatic sprinkler system in accordance with Section (x.x.)
An evacuation plan shall be implemented, specifically including the elevator, and staff personnel shall be trained in operations and procedures for elevator emergency use in normal operating mode prior to fire fighter recall.
အဓိက စိုးရိမ်ကြတာ ကတော့ မီးလောင်တဲ့ အထပ်မှာ Elevator ရပ်ပြီး လူတွေပိတ်မိ နေမှာ ကိုပါ။ Elevator သုံးခွင့် ရဘို့ အတွက် Elevator Shaft ရော Elevator Lobby ကိုပါ Fire Compartment လုပ်ပြီး Pressurized လုပ်ရပါတယ်။ အရှိန် နဲ့ သွားနေတဲ့ Elevator ကြောင့် ဖြစ်ပေါ် လာတဲ့ Piston Effect ကိုထိန်းနိုင် ဘို့ ကလည်းမလွယ် ပါဘူး။
လူကြီးတွေ၊ မသန်မစွမ်း တွေ အတွက် အထပ်မြင့် ကို ခြေကျဉ် လျှောက်ဆင်း ဘို့ ကလည်း မလွယ်တာ မို့ Elevator သုံးသင့်၊ မသုံးသင့် ဆိုတဲ့ အချက်က စဉ်းစားစရာ ဖြစ်လာ ပါပြီ။
Fire Protection Modes
M&E Systems တွေကို အကြမ်း ရှင်းပြထားတာ ကို အရင် တင်ပြခဲ့တဲ့ M&E Systems ဆိုတာ ဘာတွေလဲ။ မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
Heat Detectors / Smoke Detectors
Heat Detectors: က အပူကို အာရုံခံတာ ပါ။ Smoke Detectors ကတော့ မီးခိုးကို အာရုံခံတာ ပေါ့၊ ဒါတွေ နဲ့ Fire Alarm (မီးလှန့် အချက်ပေး စနစ်) ကို Activate လုပ်မှာ ပါ။
မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ အချင်းချင်း ဆက်သွယ် နိုင်ဘို့ အတွက် Fire Brigade communication Systems
အရေးပေါ် အခြေအနေ မှာ လူတွေ စနစ်တကျ Evacuate လုပ်နိုင်စေဘို့ ညွှန်ကြားပေးနိုင်ဘို့ အတွက်၊ Public Address Systems
Extinguishing Systems မီးကို ငြိမ်းသတ် ဘို့ အတွက် လိုအပ်တာ တွေကတော့
Standpipes (Wet / Dry Rising Mains)
Fire Hoses (Hose reels)
High-rise Buildings တွေ အတွက် အထက်က မီးသတ်စနစ် ၄ -ခု လုံး လိုအပ်ပါတယ်။
အချို့နိုင်ငံ တွေ မှာ Residential High rise (လူနေအိမ်ခန်း) တွေ Sprinkler Systems
မပါတာ ကို လျှော့ပေါ့စဉ်းစားပေး တတ်ပါတယ်။ Sprinkler Systems က မီးသတ် ရာမှာ အထိရောက်ဆုံး မို့ ဖြစ်နိုင်ရင် ပါအောင် ထည့်ပေးရ ပါမယ်။ Data Center လိုနေရာ မျိုးမှာ Gas Suppression System ထည့်ပေးထား လို့ Sprinkler ကိုဖြုတ် မပစ်သင့် ကြောင်း Fire Engineer တွေက ဆိုပါတယ်။
အရေးပေါ် အခြေအနေ မှာ သုံးလို့ ရမဲ့ Standby Power (Usually by Diesel Generator) ကို စဉ်းစားတဲ့ အခါ အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ စက်ပစ္စည်း တွေ နဲ့ အရေးပေါ် လိုအပ်ချက် တွေ အပေါ် မှီပြီး တွက်ချက် ရပါမယ်။
Emergency Command Center / Fire Command Center Equipment & Lighting
Fire Lifts (serving all floors)
Mechanical Equipment for Smoke Proof Enclosure
Power for Detection, Alarm, and Communication Systems
Emergency Command Center (အရေးပေါ် အခြေအနေ မှာ စီမံခန့်ခွဲ လမ်းညွှန် မဲ့ သူနဲ့ ပစ္စည်း တွေထားတဲ့ အခန်း) မှာ ဒါတွေ ထားရမယ်။
Fire department two-way telephone communication (ဆက်သွယ်ရေး စနစ်) service panels and controls where required by another section of this Code
Elevator floor location and operation annunciators (ဓာတ်လှေကား နေရာပြ)
Telephone for fire department use with controlled access to the public telephone
Fire Ignition (အလိုအလျောက် မီးပွင်)့
Faulty Electricity (လျှပ်စစ်လျှော့ခ်)
Arson (တို့မီး၊ ရှို့မီး)
Cooking (ချက်ပြုတ် မီး)
Renovations (အတွင်းပိုင်း ပြန်လည်ပြင်ဆင်မှု လုပ်နေစဉ်)
မီးဒါဏ်ခံ ရခြင်း အကြောင်းရင်းများ
လုံလောက် တဲ့ မီးသတ်စနစ် မရှိခြင်း
အချက်ပေးစနစ် ၊ အန္တရာယ်ကင်းသောလမ်းကြောင်း မရှိခြင်း
လျှင်မြန်တိကျသော တုံ့ပြန် မှု မရှိခြင်း
High-rise Building Fire Tragedies (အထပ်မြင့် အဆောက်အအုံ မီးဘေးသင့်မှုများ။)
Dupont Plaza, Puerto Rico
December 1986 New Year’ s Eve (နှစ်သစ်ကူး အကြိုည) မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ မီးလောင်မှုပါ။
ဟိုတယ် အလုပ်သမား သုံးယောက် က လစာ နဲ့ ကျန်းမာရေး ခံစားခွင့် တွေကို မကျေနပ် ရာက အလုပ်သမား အဖွဲ့ နဲ့ တိုင်ပင် အချို့ က အပြင်မှာ ဆန္ဒပြ နေတဲ့ အချိန် အချို့ က Ballroom နဲ့ Ground Floor မှာ ဆီလောင်း မီးရှို့ ကြပါတော့တယ်။ အမှန်က Tourists တွေကို မတည်းအောင် ကြောက်လန့်အောင် လုပ်ချင်တာပါ။ ဒါပေမဲ့ မီးက လူ ၉၇ ယောက် ကိုသေဆုံးစေခဲ့ ပြီး လူ ၁၄၀ လောက် ကို ဒါဏ်ရာရစေခဲ့ ပါတယ်။
အများစု က မီးခိုးမွှန် လို့ သေဆုံး ရတာပါ။
မီးသတ်စနစ် မလုံလောက် တာရယ်။ ထွက်ပေါက် က တံခါး တွေက အပြင်ကိုဖွင့်တာ မဟုတ်ပဲ အတွင်းကို ဖွင့်တာတွေ ဖြစ်နေပြီး လူတွေ က ကြောက်လန့် တကြား တိုးကြ တွန်းဖွင့်ကြ တော့ ဘယ်လိုမှ ဖွင့်လို့ မရတော့ ပဲ ပိတ်မိ ကုန်ပါတယ်။
ဒီ မီးမှာ Rescue Effort တွေ အကြောင်းကို ကြည့်ချင်ရင် တော့
Dupont Plaza fire/San Juan, PR-12.31.86 (Part 1)
Dupont Plaza fire/San Juan, PR-12.31.86 (Part 2)
MGM Grand fire (November 21, 1980)
Fire at Las Vegas Hilton (February 10, 1981)
M&E Space လိုအပ်ချက်တွေ ကို အရင် တင်ပြခဲ့တဲ့ ၁.၄ ၊ နေရာ လျာထားသတ်မှတ်ခြင်း။ မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
အရင်တုန်းက Post မှာ တင်ပြခဲ့သလို M&E Systems တွေဟာ နေရာ အတော်ယူပါတယ်။ အလယ်အလတ် တန်းစား Office Building (ရုံးခန်း အဆောက်အအုံ) တစ်ခုမှာ နေရာ ဧရိယာ ၄% လောက် လိုအပ်ပါတယ်။ ၂၅ ထပ်ရှိရင် တစ်ထပ်စာ လောက်လိုအပ်တာပါ။ ဒီလိုပဲ အထပ် ၅၀ ရှိရင် ၂ ထပ်၊ အထပ် ၁၀၀ ရှိရင် ၄ ထပ် စာ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ Initial Planning Stage မှာထဲ က နေရာကို ယူမထားခဲ့ ရင် နောက်မှ လိုချင်သလို ထပ်တိုး ချင်တိုင်း တိုးလို့ ရနိုင်တာမျိုး မဟုတ်တာ ပြောစရာတောင် မလိုတော့ပါဘူး။
ရွေးချယ်ထားတဲ့ systems တွေကို မူတည်ပြီး M&E Equipment Spaces တွေဟာ Centralized (သို့မဟုတ်) Decentralized ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ နှစ်ခုလုံး အထပ်တိုင်းမှာ Local Equipments အတွက် နဲ့ Distribution Shafts တွေအတွက် On-Floor (Local Space) နေရာ လိုအပ် ပါတယ်။ အဓိက ကွာခြားချက် ကတော့ Centralized Systems တွေမှာ အဓိက Equipments တွေ အထပ် တစ်ထပ် နှစ်ထပ်မှာ စုစည်းတပ်ဆင် ထားပြီး On-Floor နေရာလိုအပ်ချက် နည်းပါမယ်။ Decentralized Systems တွေမှာ ကတော့ပြောင်းပြန်ပေါ့။
High-rise Building အားလုံးလိုလို မှာ Basement Floor (မြေအောက်ထပ်) တစ်ထပ် အနည်းဆုံး ပါလေ့ ရှိပါတယ်။ Underground Parking (ကားရပ်နားရန် နေရာ) Utility Service အတွက်၊ Delivery of Supplies, Fuel Storage
Underground Levels က Foundation အတွက် ပိုပြီး ကောင်းမွန် ခိုင်မာတဲ့ Structural Stability ကိုပေးပါတယ်။ သတ်မှတ် ထားတဲ့ Car Parking အရေအတွက် ပါဘို့ City Codes တွေမှာ ပြဋ္ဌာန်းထား လေ့ရှိတာမို့ လည်း Underground Parking က ရှောင်လွှဲလို့ မရနိုင်တဲ့ လိုအပ်ချက် ဖြစ်ပါတယ်။
ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ M&E Central Plant တွေကို Underground Level မှာ ထားသင့်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အမြဲတမ်း ဖြစ်နိုင်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ M&E systems risers တွေဟာ Building Core နဲ့ နီးတဲ့ နေရာတွေမှာ ရှိရမှာ မို့ တစ်ခါတစ်ရံ Parking နဲ့ အကူးအသန်း လုပ်ဘို့ ရာမှာ အတားအဆီး ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် M&E Central Plant တွေကို Roof (သို့မဟုတ်) Intermediate Level မှာ ထားရနိုင်ပါတယ်။
Equipments တွေရဲ့သဘာဝ အရ လည်း နေရာ ကို ရွေးရပါတယ်။ ဥပမာ Cooling Tower ဆိုရင် လေသွားလေလာ ကောင်းတဲ့ အဆောက်အအုံ ရဲ့ အပြင် (သို့) အမိုးပေါ်မှာပဲ ထားလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အမိုး ပေါ် တင်ထားဘို့ ဆိုတာကလည်း High-rise Building တွေမှာ လွယ်လှတာ မဟုတ်ပါဘူး။
Central Plant Room လိုအပ်ချက်တွေ ကို ၁.၄ ၊ နေရာ လျာထားသတ်မှတ်ခြင်း။ မှာပြခဲ့ပါတယ်။
သတိထားရမှာ က ဒီနေရာလို အပ်ချက်တွေ စဉ်းစားတဲ့ အခါ Structural Column နဲ့ Architectural Detail တွေကို ထည့် စဉ်းစား ပေးဘို့ပါ။
Loading / Unloading (ပစ္စည်းတွေ အတင်အချ လုပ်ဘို့နေရာ) ကို လွယ်ကူစွာ သွားနိုင်၊ ရောက်နိုင် ဘို့၊
M&E Equipments တွေ ပြင်ဆင်ဘို့ လိုအပ်လို့ လဲရမယ်၊ ဖြုတ်ရမယ် ဆိုရင် လည်း သယ်ထုတ်၊ ပြန်သွင်း လုပ်နိုင်ဘို့။
လေဝင်လေထွက် ကောင်းနိုင်ဘို့ Outside Air Supply နဲ့ Exhaust Air Discharge တွေနဲ့ နီးနီးနားနားဖြစ်ဘို့။ (ဒီနေရာ မှာ Outside Air Supply နဲ့ Exhaust Air Discharge ကြားမှာ လုံလောက် တဲ့ အကွာအဝေး ရှိရမယ် ဆိုတဲ့ အချက်ကိုလည်းစဉ်းစား ရမှာပါ။ အနည်းဆုံး 5m (16.5 ft) နဲ့ တစ်ခါတစ်ရံ 8m (26.2 ft) လောက်အထိ လိုအပ်နိုင်ပါတယ်။)
လုံလောက် တဲ့ Floor Height (အထပ် အမြင့်) ရနိုင်ဘို့
အဆင်ပြေပြေ Car Parking Plan (ကားရပ်နား စရာ နေရာတွေ) နဲ့ သင့်တော်စွာ ဆက်စပ်နိုင်ဘို့။
Safety (အန္တရာယ် ကင်းဝေး စေဘို့) - ဥပမာ Boilers, Chillers, Liquid Filled Transformers တို့လို M&E Equipments တွေမှာ Stored Energy နဲ့ Toxic Material တွေ ပါဝင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီ Equipments တွေကို Fireproof Walls တွေနဲ့ ကာရံထားရ ပါမယ်။
M&E System Components တစ်ခု နဲ့ တစ်ခု ကြား နီးနီးနားနား ဖြစ်စေဘို့။ ဥပမာ Chiller ရဲ့ Condenser နဲ့ Cooling Towers ကြား၊
Piping System Pressure - Hydrostatic Pressure ကို လိုအပ်ချက် လည်းရအောင် ခံနိုင်ရည် ထက် လည်း မလွန်အောင် ဘယ်လိုလုပ် မှာလဲ၊
Ease of Maintenance ထိန်းသိမ်းဘို့
Vibration and Noise from Equipment စက်ခန်းတွေ နဲ့ နီးတဲ့ နေရာမှာ တိတ်ဆိပ်ငြိမ်သက် မှုကို လိုအပ်တဲ့ အခန်းမျိုး ရှိရင် အတော် ခက်ခဲပါတယ်။
Aesthetics : Architects အများစု က M&E Plants တွေကို ဖုံးကွယ်ထားချင် ကြပါတယ်။ အချို့ Architects တွေကတော့ M&E Plants တွေကို မြင်ကွင်းမှာ ပြသထားလိုကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် M&E Plant တွေက Architect's Concept ကို လိုက်ပြီး အနုပညာ အားဖြည့်ပေး နိုင်တာ ရှိသလို၊ အားပျော့ စေနိုင်တာ လည်း ရှိပါတယ်။
Code and Authority Requirements တချို့ နိုင်ငံတွေမှာ လည်း Authorities တွေရဲ့ လိုအပ်ချက်ကလည်း Fire Water Tank နဲ့ Fire Fighting Equipments တွေကို Ground Floor (or) Basement 1st Storey မှာပဲ ထားရပါတယ်။ သောက်ရေ ပေးတဲ့ Utilities Authorities တွေကလည်း Storage / Transfer Tank (ရေကန်) တွေကို Basement Floor တွေမှာ Flood (ရေလွှမ်း) ခဲ့ရင် ရေညစ်တွေ ဝင်မှာစိုးလို့ ပါ။
တစ်ခါတစ်ရံ Podium လို့ခေါ်တဲ့ Tower အောက်ခြေမှာ ပိုပြီး ကျယ်တဲ့ အထပ်တွေ ပါခဲ့ရင် Podium Roof ကို သုံးလို့ရကောင်း ရနိုင်ပါတယ်။
Cooling Tower ရဲ့ Exhaust က Moisture Saturated Air ဖြစ်တဲ့ အပြင် Fresh Air အနေနဲ့ သုံးဘို့မသင့်တော် တာမို့ Fresh Air Intake တွေကို Cooling Tower နဲ့ဝေးရာ မှာပဲထားရပါတယ်။
AHU မှာ ဘာ components တွေထည့်မှာလဲ။
Mixing Box – Fresh Air (with or without pre-cool) နဲ့ Return Air ကို သမအောင် ရောစပ်ဘို့ ပါ။ တစ်ခါတစ်ရံ Room Plenum လုပ်ခွင့်ရရင် Mixing Box မလိုပါဘူး။ Room Plenum ဆိုရင် AHU အခန်းက Plenum ဖြစ်သွားတာပါ။ AHU အခန်းထဲက လေကို တိုက်ရိုက် စုတ်ယူတဲ့အခါ Negative Pressure ဖြစ်သွားတာမို့ Drainage Pipe တွေ အခြား Contaminants တွေ ကိုစုတ်ယူနိုင်တာ ကြောင့် သိပ်မကြိုက်ပါဘူး။
Air Washers - အချို့နေရာတွေ မှာ Air Washers ထည့်တတ်ပါတယ်။ အဓိက ကတော့ Humidify လုပ်ဘို့ပါ။ Evaporative Cooling လည်း လုပ်လို့ရပါတယ်။ လေထဲမှာ ပါလာတဲ့ အမှုန်အမွှား ကိုအတိုင်းအတာ တစ်ခုထိလည်း သန့်စင်ပေးနိုင်ပါတယ်။
Filter Sections - သုံးမဲ့ Application ပေါ်မူတည်ပြီး Filter Section တစ်ခု (သို့) တစ်ခုထက်ပိုပြီး ပါနိုင်ပါတယ်။ သိပ်ပြီး အမှုန်အမွှားကင်း၊ သန့်ရှင်း ခြင်ရင် HEPA Filter Section တောင် ပါနိုင် ပါသေးတယ်။
Coil Sections - သုံးမဲ့ Application ပေါ်မူတည်ပြီး Cooling Coil (or) Heating Coil (or) BOTH ပါနိုင်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံ Run Around Coils လို့ခေါ်တဲ့ Pre-Cool နဲ့ Re-Heat Loop Coil လည်း ပါနိုင်ပါတယ်။ ဒီ Run Around Coils အစား Heat Pipe Loop Coils ကိုလည်း သုံးနိုင်ပါတယ်။
Fan Section – AHU fan နဲ့ Motor ကို တတ်ဆင်ဘို့ အတွက် Fan Section လိုအပ်ပါတယ်။
ခုနောက်ပိုင်း Environment Issue တွေကို စဉ်းစားလာတဲ့ အခါ Indoor Air Quality ကလည်း အဓိက ဖြစ်လာပါတယ်။ Indoor Air ထဲမှာ ပါတဲ့ ပိုးမွှားတွေ၊ ကပ်ပါးတွေ၊ မှိုတွေ ကို နှိမ်နင်းဘို့ UV Sterilizer Lamp တွေထည့်ပေးလာတာ တွေ့ရပါတယ်။ အရင်တုန်းက တော့ အရေးကြီးတဲ့ Bio-Hazard ဖြစ်နိုင်တဲ့ အခန်းတွေမှာ ပဲ UV sterilizer တွေသုံးခဲ့ ကြတာပါ။
High rise building တွေ မှာ Mechanical Engineer တွေ အဓိက တွေ့ရမဲ့ အခက်အခဲ ကတော့ ရေလှောင်ကန် တွေ ထားဘို့ နေရာတွေ ပါ။ အထပ်မြင့် လာတာနဲ့ ရေကန်တွေ၊ pumps တွေ ကလည်း အဆင့်ဆင့် လိုအပ်လာပါတယ်။ domestic water သောက်ရေသုံးရေ သာမက fire fighting tanks တွေ အတွက် ပါ စဉ်းစားစရာ လိုအပ်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ နေရာသာ မက အလေးချိန် က လည်း စီးတာမို့ structural load မှာလည်း အဓိက စဉ်းစားရမဲ့ အချက် တစ်ခု အနေနဲ ပါဝင်ပါတယ်။ အချို့နိုင်ငံ တွေ မှာ အမြင့်ဆုံး သုံးနိုင်တဲ့ Pump head ကို ကန့်သတ်ထား တတ်တာကြောင့် လိုအပ်ချက် က နည်းလှတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဥပမာ၊ မလေးရှား နိုင်ငံ၊ Kuala Lumpur မြို့မှာ သောက်သုံးရေဖြန့်ပေးတဲ့ SYABAS ရဲ့ သတ်မှတ်ချက် အရ End Suction Pump head ကို 75m maximum ထားရမယ် လို့ဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် အမြင့် မီတာ ၃၆၀ လောက် ရှိတဲ့ အဆောက်အအုံ တစ်ခု အတွက် (မြေညီ (သို့) မြေအောက်၊ တစ်ကန် နှင့် အမိုးပေါ် တစ်ကန် အပါအဝင်) ရေကန် ၆ ဆင့် အနည်းဆုံး လိုပါတယ်။ တစ်ဆင့် ကနေ တစ်ဆင့် ကို ပို့ပေးဘို့ Transfer Pumps တွေလည်း လိုအပ်ပြန်ပါတယ်။
Fire Protection အတွက် လည်း အလားတူ ပါပဲ။ Wet riser tanks, Sprinkler tanks, Hosereel tanks စသဖြင့် အမျိုးမျိုး လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီစနစ်တွေ အတွက် သီးသန့် လိုအပ်တဲ့ Fire Pumps တွေ အပြင် တစ်ဆင့် ကနေ တစ်ဆင့် ကို ပို့ပေးဘို့ Transfer Pumps တွေလည်း လိုအပ်ပြန်ပါတယ်။
အောက်က ရေးလက်စ အကြမ်းပါ။ အပတ်စဉ် ဆက်ရေး နေတုန်း ပါ။
Temperature Stack Effect
အဆောက်အအုံ ရဲ့ အပြင်နဲ့ အတွင်း အပူချိန် သိပ်ကွာနေရင်၊ ပြီးတော့ အမြင့်လည်းရှိ၊ လေဝင်၊ လေထွက် ပေါက်လည်းရှိမယ် ဆိုရင် Stack effect ကို ထည့်သွင်း စဉ်းစား ပေးရပါမယ်။ ဒီ stack effect က တံခါးဖွင့်တဲ့ ပိတ်တဲ့ အခါ အရှိန် နဲ့ မှုတ်ထုတ်သလို ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဆောင်းတွင်းဘက် အအေးပြင်းတဲ့ တိုကျို လို နယူးယောက် လို မြို့တွေ က High-rise Buildings တွေမှာ ဒီ Stack effect အခြေအနေ ကို ထည့်သွင်း စဉ်းစားပေးရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီဒါဏ် ကို ခံနိုင်အောင် တံခါးတွေ က ဆွဲဖွင့်ရတဲ့ တံခါးတွေ အစား ဆုံလည်တံခါးတွေ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ စကာင်္ပူ၊ မလေးရှား လို တစ်နှစ်ပတ်လုံး အပူချိန် အပြောင်းအလဲ သိပ်မရှိ၊ Indoor temperature နဲ့ outdoor temperatureအလွန်မကွာ တဲ့ နေရာတွေ မှာ တော့ ဒီပြဿနာ က သိပ်မကြီး လှပါဘူး။
Stack effect ကိုတွက်ချက်တာ က တော့ CFD (Computational Fluid Dynamics) specialist တွေရဲ့ အလုပ်ပါ။
Water / Hydronic Systems Pressure(ရေဖိအား ထိန်းခြင်း)
Cavitation ဆိုတာက စီးနေတဲ့ ရေထဲ မှာ ပလုံစီ လာတာ ကို ခေါ်တာပါ။
ရေးသားသူပြုစုသူ ကျော်ထက်ဝင်း နည်းပညာတက္ကသိုလ်-ဘားအံမြေ အချိန် 7:32 AM